Ursa Minor: njirimara, kpakpando, mkpa na akụkọ ifo | Netwọk Mgbasa Ozi
Portillo nke German | 26/07/2021 11:03 | Astron
Otu n’ime kpakpando kachasị mkpa maka ndị na-enyocha mbara igwe bụ Obere agba. Ọ dị na ugwu ugwu ma enwere ike ịhụ ya na Europe n'afọ niile. Igwe kpakpando a nwere otutu kpakpando, nke bu isi ya bu Polaris. Ọ bụ otu ihe dị mkpa maka ndị na-enyocha mbara igwe ebe ọ bụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị na mbara igwe na-eji kpakpando a dị ka à ga-asị na ọ bụ axis ka ọ na-agbagharị. Ọzọkwa, na akụkọ mgbe ochie nke ndị Vedas India, Polaris na-arụ ọrụ dị oke mkpa dị ka onye isi nke otu chi.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile, ọrụ na ihe ọ pụtara nke kpakpando Ursa Minor.
2 Akụkọ ifo Ursa Minor
3 Main kpakpando nke Ursa Minor
4 Mkpa kpakpando osisi
5 Etu esi amata kpakpando osisi
Ọdịdị nke Ursa Minor yiri nke Akwa agba, ma n’adịghị iche, axis ya kwụ ọtọ, mana agbagọla azụ. Isi kpakpando nke kpakpando a, Polaris, na-ejigide ọnọdụ dị na mbara igwe n'abalị. Ogologo ọnọdụ kpakpando dị n'ebe ugwu kwekọrọ na ohere nke onye na-ekiri ya. Otu kpakpando a mejuputara kpakpando asaa nke yiri udi ugboala, ano n’ime ha buru akuku miri nke ugbo ala ma ndi ozo ato bu ugbo ala.
Ihe Ursa Minor a ma ama bu North Star, nke di na mgbatị nke uwa, ya mere o noro na mbara igwe ma zoo aka na ugwu ugwu. Ndị na-agagharị ụgbọ mmiri na-eji ya dịka North Star. Akwụkwọ ntụaka n'oge njem ahụ. Ewezuga North Star, Ursa Minor enweghi ihe mmasi nke igwe na-amu amu. N'iburu ọnọdụ ya, a pụrụ ịhụ Ursa Minor naanị na mgbago ugwu, mana na nloghachi, n'akụkụ ụwa ahụ, a na-ahụ ya n'afọ niile. Ya na onye ozo bu Big Dipper, obu otu n'ime ihe kachasi nma nke elu ugwu.
Akụkọ ifo Ursa Minor
Na akụkọ ifo ndị Gris, enwere ọtụtụ echiche banyere mmalite nke Ursa Minor. Otu n’ime ha bụ Fénice, onye a gbanwere bu Artemis buru Beza mgbe ihe ya masiri ya. Akụkọ a yitere nnọọ ka nke Callisto. Ejikọtara ya na Ursa Major, yabụ ụfọdụ ndị ode akwụkwọ kwenyere na a ga-enwerịrị ọdachi na akụkọ izizi ya na mkpụrụ edemede abụọ yiri ibe ha (Zeus gaara eme ka Callisto bụrụ Ursa Major ma mesịa, Artemis gaara eme ya Ursa Minor).
Callisto bụ ezigbo akụkọ ifo nke hụrụ Zeus n'anya. Ha niile nwere nwa ha nwoke Arcas. Nwunye Zeus, Hera, mere ka Callisto ghọọ anụ ọhịa n'ihi ekworo. Ọtụtụ afọ mgbe e mesịrị, Callisto zutere nwa ya nwoke, bụ onye na-amataghị ya n'ụdị anụmanụ ma chọọ igbu ya. Iji zọpụta ya Zeus mere ka nwa ya nwoke ghọọ bea wee debe ha niile na mbara igwe, na-ebute Ursa Major na Ursa Minor.
Main kpakpando nke Ursa Minor
Ka anyi ichikota nke bu kpakpando nke Ursa Minor:
Ursae Minoris (Polaris, Polar Star ma ọ bụ North Star), kpakpando na-egbuke egbuke na kpakpando, odo na-acha odo odo na Cepheid na-agbanwe ịdị ukwuu 1,97.
Ursae Minoris (Kochab), nke dị ukwuu 2,07, nnukwu odo odo oroma nke ejiribu dị ka kpakpando.
Ursae Minoris (Pherkad), nke dị ukwuu 3,00, na-acha ọcha na-agbanwe agbanwe kpakpando nke Delta Scuti ụdị.
Ursae Minoris (Yildun ma ọ bụ Pherkard), kpakpando na-acha ọcha nke ịdị elu 4,35.
Ursae Minoris, eclipsing ọnụọgụ abụọ na agbanwe RS Canum Venaticorum nke ịdị ukwuu 4,21.
Ursae Minoris (Anwar al Farkadain), ọcha-edo edo dwarf nke uku 4,95.
Calvera, aha na-adịghị mma maka ihe echere na ọ ga-abụ kpakpando kacha nso na ụwa.
Mkpa kpakpando osisi
Dịka anyị kwuburu na mbụ, Polaris dị na kpakpando Ursa Minor. Nke a bụ kpakpando nke nwere ike ịhụ nke ọma na mbara igwe anyị n'afọ niile. Naanị na anyị nwere ike ịhụ ndị bi na mgbago ugwu. Otu kpakpando asaa nwere kpakpando asaa, gụnyere Pole Star. Enwere ike ịmata ya nke ọma dịka nnukwu kpakpando na-acha odo odo, nke e ji mara oke oke na oke karịa anyanwụ. Ọ bụ ezie na nke a eyighị ka ọ dị mma, ọ bụ kpakpando buru ibu karịa anyanwụ. Ma, ọ gafeela ihe ọ dị ka ọ dị ya, yabụ na anyị enweghị ike ịhụ ya nha anya ma ọ bụ kwe ka ọ na-enye anyị ìhè etu anwụ na-ahụ.
Tupu e mepụta radar na GPS na usoro nhazi ihu ala, a na-eji Pole Star dị ka ntuziaka igodo. Nke a nwere ike ịbụ n'ihi na ọ na - enyere aka ịhazi onwe gị na pole nke mbara igwe.
Etu esi amata kpakpando osisi
Ọ bụ kpakpando guzobere na agbanyeghị na kpakpando ndị ọzọ yiri ka ha na-agagharị na mbara igwe, ha abụghị. Ọ dị mfe ịmata n'ihi na ọ bụ kpam kpam na-agbanwe agbanwe. Ọ dị nso na Nnukwu Dipper. Kpakpando abụọ ndị a yiriri na ha nwere kpakpando asaa, nke dịkwa ka ụgbọ ala.
Ọ dị iche na kpakpando ndị ọzọ n’ihi na ọ bụ kpakpando nke na-adịgide n’eluigwe. Ga - ahụrịrị kpakpando ndị ọzọ ka ha na-agba gburugburu ụwa gburugburu. Njegharị nke kpakpando na-ewe awa iri abụọ na anọ, dị ka mbara ala na anyanwụ, yabụ ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmata ọnọdụ nke kpakpando poolu n’oge ụfọdụ, anyị ga-ahụ Nnukwu nri. Emere nke a nihi na obu kpakpando di nfe nke ichoro ma di ya nso bu kpakpando Pole.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịhụ ya, naanị anyị ga-ese akara ngosi n'echiche nke na-ewere ebe ntụaka abụọ kpakpando dị na kpakpando Ursa Major a na-akpọ Merak na Dhube. Kpakpando abụọ a dị mfe nghọta n’eluigwe. Ozugbo ha hụrụ, anyị ga-ese ihe ọzọ myiyi akara na a anya nke 5 ugboro na n'etiti abụọ ndị a na-ahụ osisi Star.
N'akụkọ ihe mere eme nile, a na-eji kpakpando a eme ihe maka isi ọtụtụ puku ndị ọrụ ụgbọ mmiri na-agafe n'akụkụ oké osimiri. Okwesiri iburu n’uche na ọ bụ naanị ndị jiri ụgbọ mmiri na-agafe n’ugwu ugwu ga-ahụ ya. N'ihi kpakpando a nke jeworo ozi dị ka ihe nduzi nye ọtụtụ mmadụ, ha nwere ike iru ọnọdụ nke obodo ahụ nke ọma.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere kpakpando Ursa Minor.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Obere agba
Oké osimiri nke ụwa
Kedu ihe bụ okwute